Afovoany Atsinanana: Sombiny Amin’ny Eid · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Avrily 2018 4:21 GMT
Ho an'ireo Miozolomana an-tapitrisany manerantany, fotoana ho an'ny fankalazana, fiarahan'ny fianakaviana sy fandinihana momba izany ny Eid Al Adha. Ity sombiny amin'ireo fanehoan-kevitry ny bilaogera ao Tonizia, Koety, Ejypta, ary Tiorkia.
Tsy afa-po tamin'ny ravaka Eid? AquaBlue, avy any Tonizia, miarahaba ny mpamakiny Tratry ny Eid, ary nanampy hoe:
Raha ny marina, isaky ny manakaiky ny fety Islamika, ary na aiza na aiza toerana misy ahy amin'izao tontolo izao, maheno fitoloko mitovy sy fitarainana avy amin'ireo Miozolomana aho fa mankaleo, mandringa, manelingelina ny fety … ary mazava ho azy fa tsy mila resahiko intsony ireo fanehoan-kevitra tena ratsy mampitaha ny teknika fankalazan'ny Miozolomana amin'ireo olona manana finoana sy fivavahana hafa.
Raha mieritreritra ianao fa mankaleo ny fankalazana Miozolomana ary efa lany andro na baranahina na na inona na inona lazaina amin'ny endrika fandravahana ataon'izy ireo, nahoana ianao no TSY MANAO ZAVATRA MOMBA IZANY! Raha hampiseho ny safidy ratsy ny olona, maninona raha mizara hevitra tsara kokoa sy manome torohevitra tsara azony ampiasaina? Nahoana ianao no tsy mampianatra ny olona fantatrao mba ho lasa mpandravaka tsara kokoa, na manoro hevitra ny olona izay tompon'andraikitra amin'ny fandravahana ny tranombarotra mba hanao izany araka ny tokony izy? Raha bilaogera ianao, mandefasa lisitry ny tokony atao sy ny tsy tokony atao, mizarà sary misy ohatra fandravahana mahafinaritra, asehoy ny lafiny tsara mba harahan'ny olona, mahatonga ny olona hamoy ny zava-drehetra ny fomba fijery ratsy.
Avy any Tiorkia, Talk Turkey miresaka momba ny fety sy ny fomba fijerin'ny fivavahana isan-karazany an'izany. Hoy izy nanoratra:
Nahoana no tsy resahana mihitsy ny faharesen-dahatr'i Abrahama sy ny halalin'ny finoany an'Andriamanitra kanefa vonona ny hanao sorona an'i Isaka zanany mihitsy izy (ao amin'ny Baiboly)? Ary araka ny sary asongadin'i Caravaggio eo ambony, ny famonoana toy izany dia tsy maintsy tanterahana amin'ny fanapahana ny tendan'ny ankizilahy! Ny tiako ambara, dia tsy nisy fomba hafa ‘am-piantrana’ amin'ny famonoana olombelona noforonina ve tamin'izany fotoana izany? Nahoana ny ‘Tandrefana’ no mangina rehefa miresaka momba ny votoaty “mahavanon-doza” ao amin'ny Baiboly?
Na izany na tsy izany, ao anatin'ny endrika Islamika ihany no ovaina ny anaran'ny tsy manan-tsiny. Isaka dia Ismaela (zanaka lahy “hafa”). Saingy mitovy ny fiafaran'ny tantara. Ny ondrilahy iindray no natao sorona raha nanapa-kevitra Andriamanitra fa nandalo fitsapana araka ny sitrapony sy ny fahavononana ary ny fitiavany an'Andriamanitra i Abrahama …
Ho an'ilay bilaogera Koesiana Marzouq, avy ao amin'ny ZDistrict, ny Eid dia manamarika fotoan-dehibe iray satria nanao Hajj, fivahinianana masina fanao isan-taona tany Lameka ity bilaogera ity. Toy izao no amaritany ny fanomanany izany:
Marobe ireo zavatra noraketiko ho fahatsiarovana nandritra nandritra ny tapa-bolana lasa, saingy nanana fanontaniana an-tapitrisa aho ary nanoratra zavatra maro mihitsy aza. Hiaraka amin'ireo zanak'olo-mpiray tampo amiko aho izay efa nanao Haj imbetsaka aho amin'izay aho tsy dia very ary manana laza tsara ny Hamlah (Vondrona Fivahiniana Masina). Mandreraka ara-batana sy ara-tsaina izany saingy mahafa-po, andraikitry ny Miozolomana tsirairay ny mamita izany. Nitondra ny fakantsariko mihitsy aza aho mba haka sary maromaro, saingy tsy azoko antoka tamin'ny voalohany ka nanontany aho ary norisihana haka sary.
Ao Ejipta, manome lisitry ny zavatra valo hatao amin'ny fankalazana ny Eid, fomba Egyptiana ao amin'ny Chocolate Mints in a Jar i Jessyz. Anisan'izany ireto:
Mijery horonantsary taloha ao amin'ny fahitalavitra
Antsoy ny rehetra aorian'ny vavaka Eid mba hilaza hoe “Eid Mubarak” (Tratry ny Eid), azonao atao mazava ho azy ny manao dingana iray bebe kokoa ary miantso mialoha ny vavaka mba hanairana ny rehetra
Ary miverina farany ao Koety, manana lisitra ihany koa i Ansam izay hizarany amintsika ireto manaraka ireto:
* Akanjo vaovao: amarino
* Kiraro vaovao: amarino
* Bà manify (collant) (raha mangatsiaka): amarino
* Hoho: amarino
* Fikoloana tarehy: amarino
* Eidiya (vola): Tsy mbola tpt !!! Tena sahiran'ny asa aho tamin'ny herinandro lasa talohan'ny Eid, noho izany, manakombona ny rantsan-tanako satria mizara vola kely ny milina fakàna vola (DAB) (raha tsy izany, hifanakalo amin'ny raiko/reniko) heehee
* Misakafo hariva miaraka amin'ny fianakaviana: amarino